HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 1-APRIL 2021
Thursday April 01, 2021 - 08:38:33 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa Shalay xiray qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, iyaga oo hakiyey dha q-dhaqaaqa gaadiidka dadweynaha & midka gaarka loo leeyahay.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay wa ddooyinkaasi ka celinayaan gaadiidka noocya diisa kala duwan, iyada oo loo ogol yahay kaliya dadka lugeynaya.
Xirnaashaha waddooyinkan ayaa waxaa loo sababeynayaa kulanka Shalay ee baarlamaan ka oo ah mid xasaasi ah, islamarkaana laga ma mnuucay xildhibaanada qaar.
Arrintan ayaa sidoo kale saameyn xoogan ku yeelatay shacabka M/Muqdisho oo aan horey lo ogu war-gelin xirnaasha jidadkaasi.
"Ciidamada ammaanka ayaa xitaa Gaadiidka Ardayda u diiday inay ka gudbaan waddooyinka u xiran, Dadka da’aad kala duwan ayaa lugeyn aya, qof weliba waxa uu ku weydiinayaa sabab ta loo xiray balse qofba wax ayuu ku sheegay aa, waxaa dib u dhac waqti ku yimid shaqaala ha, Ardyada & Dadka u socda Goobaha Caafim aadka,” ayuu yiri qof ka mid ah dadka deganka.
Inta badan ciidamada ammaanka ayaa hakiya dhaq-dhaqaaq waddooyinka marka ay dhacaya an shirarka waa weyn ama Muqdisho ay imaan ayaan wafuuf caalami ah. Hase yeeshee waxaa ay ahyed wadooyina la xiraty talaabo looga gol lahaa in aysan kulanka baarlamaanka aysan soo gelin xubanah xildhibaanada la ganaaxay muddo 5 kulan uu baarlamaanka yeelanayo ka dib markii kulnkii ore ee baarlamaanka ay buuq ka dhaliyeen kulanka lgu baajiyey taasoo goom iyaha baarlamaanka soo saaray qoraal looga mamanuucaayo in ay soo xaadiraan shank ulna taasoo ay iyagan balanqaadeen in ay ka soo qeyb galayaan oo wixii dhaca masuuliyadeeda uu lahaanayo guddoomiyaha baarlamaanka. Sa babtaa ayaa loo xiray wadooyinka sida muuqata
Mahad Salaad "Ciidamada na celiyay waxaa hoggaaminayay Saraakiil Qaraabada ah”
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa qoraal uu ku daabacay Facebook-giisa uga hadlay dhacdadii Shalay,isaga oo sheegay in ciidamo ka tirsan dowladda ay ka celiyeen koontaroolada laga soo galo madaxyooyada oo ay ku dhex taallo xarunta holaha shacab ka ee Villa Hargeysa ee ay ku shir aan golaha Shacabka.
SHALAY MAXAA DHACAY. MAXA ASE NALA GUDBOON?
Isgoyska Dabka iyo Ceelgaabta oo ah irdaha Madaxtooyada laga galo marka loo socdo xarun ta Golaha Shacabka ayaa Shalay nagula celiy ay aniga iyo Xildhibaano kale oo u socday shir kii Golaha Shacabka.
Ciidamada na celiyay waxay ahaayeen kuwa Booliska waxaana hoggaaminayay saraakiil qar aabada ah oo sida la ii sheegay Habeen Hore la soo xu lay,malaha Farmaajo wuxuu islahaa hadii wax dhacaan kuwa dhimanaya iyo kuwa laga dhima nayo isku iyaga ha noqdeen. Ciidamada kale Fa had iyo Farmaajo ku talagaleena waxaa la ii sheegay inay dhoobnaaye en irida Madaxtooya da ilaa Villa Hargeysa oo ah Xarunta Golaha Shacabka!.
Nasiib wanaag ciidamadii nala socday iyo ku wii meesha aan ugu nimid dad qaraabo ah oo is garanaya ayay ahaayeen. Saraakiishii ciidama daas watay waa noo yimaadeen, mana rabo in aan ka faalloodo wixii ina dhex maray lkn waxa an rabaa inaan u mahadceliyo, kuna amaano shaqada ay dalka u hayaan iyo fahamkooda ku aadan marxalada siyaasadeed iyo mida amni ee dalku ku suganyahay.
Haddaan u soo laabto biyadhaca hadalkeyga markaan oo kale Soomaalidii hore waxay dhihi jireen
"NINKII LOWGA KAA GUBA XAGASHA AYAA LAGA GUBAA”.
Rag aan isdayno wuxuu ku dhaamo la waa ee shirarka jaraa’id iyo sheekadaan aan dhama ad ka lahayn inta la iska dhaafo, hayin hala noq do ama heeryada Farmaajo hala iska dulqaado! W/Q. Xildhibaan Mahad Salaad
Xildhibaanada Golaha Shacabka Oo Goor Dhow Ansixiyay Laba Xubnood
Xildhibaanada G/Shacabka BFS ee muddo xil eedkoodu dhammaaday ayaa Maata waxaa uu kulan uga socdaa Xarunta Villa Hargeysa ee M. Muqdisho.
Ajenadaha kulanka Xildhibaanada ayaa wax aa uu yahay Cudurka halista ah ee COVID-19, U codeynta laba xubnood oo kamid noqonaya Guddiga Madaxa-banaan ee Xuduudaha.
Guddoomiyaha GSh.Md.Maxamed Mursal Sh. C/raxmaan iyo labadiisa ku-xigeenka ayaa ku ankaan shir guddoominaya, isla markaana waxaa goobjo og ka ah 139 Xildhibaan.
Xildhibaanada G/Shacab ka ayaa ansixiyay laba xu bnood oo kamid noqo na ya Guddiga Madaxa-bana an ee Xuduudaha, kuwa asi oo kala ah Axmed Zeylici Muuse iyo Maxam ed Cusmaan Cabdullaahi Xamza
136 Xildhibaan ayaa ogolaaday in labada xubno od ay ka mid noqdaan Guddiga Madaxa-banaan ee Xuduudaha, waxaana diiday saddex Xildhib aan, mana jiro Xildhibaan ka aamusay, sida uu shaaciyay Guddoomiye Mursal.
Kulanka ayaa waxaa ka maqan 15 Xildhiba an oo horey Guddoomiye Maxamed Mursal la jo ojiyay ka qeyb galka kulamada Baarlamaanka, kadib markii Xildhibaanada ay sameeyeen fo wdo iyo buuq kulankii sabtida.
Gudoomiyaha Golaha Shacabka oo cafis u fidiyay Xildhibaanadii la ganaaxay
Wararka ka imaanaya M/Muqdisho ayaa shee gaya in Gudoomiyaha G/Sha cabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan uu aqbalay in cafis loo fidiyo 15-kii Xildhiba an ee laga ganaa xay shan ku lan, oo ka mid ah kulamada G/Shacabka.
Xildhibaanadan ayaa Sabtidii lagu eedeeyay in is hortaag ku sameeyeen kulan uu xilligaa Go laha Shacabka ku lahaa Xaruntooda M/Muqdi sho, xilli Xildhibaanadu ka biyo diidaneyd qor she socday oo sida ay sheegeen muddo kordh in loogu sameynayo Baarlamaanka iyo Madaxt ooyada. Xildhibaanadan ayaa Shalay la ga hor istaagay inay ka qaybgalaan kulan ay Xildhibaa nada Golaha Shacabka ku yeesheen Xarunta Vi lla Hargeisa, ka dib markii ciidan fara-badan la gu soo daadiyay barraha kontoroolada ee laga ilaaliyo Aqalka Madaxtooyada iyo isg oysyada qaar ee M.Muqdisho. Xubno uu horkacayay Gu doomiyihii hore ee Baarlamaanka Somaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Aadan Madoo be) oo la kulmay G/G/Shacabka ayaa ugu baaq ay in Guddoonka uu cafis u fidiyo Xildhibaana dasi, taasoona uu Gudoomiye Mu rsal aqbalay.
Xildhibaanadan ayaa la filayaa inay ka qaybg alaan kulanka maalinta Sabtida ay Golaha Shac abka ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, haddii aanu qorshuhu waxba iska bedelin.
Da’daallada ay Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif ka wadaan MUQDISHO
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sh.Shariif Sh.Axmed iyo Xasan Sh.Maxamuud iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Midowga Mu sharaxiinta ayaa 7aadkii la soo dhaafay ka sha qeeyay sidii loo xalin lahaa muranka ka taagan doorashada Soomaaliya.
Xasan Sheekh iyo She ekh Shariif ayaa ka shaqe eyay sidii la isugu keeni la haa madaxda maamula da iyo kuwa mucaaradka iyadoo ay goobjoog yi hiin wakiilada caalamka. Sidoo kale 2dan mada xweyne ee hore ayaa xoog badan geliyay sidii ay dhinacyadu isu fahmi lahaayeen, waana sa babta keentay inay qabsoomaan shirar u gaar ah 5-ta Madaxweyne ee maamulada dalka.
Wararka aan helnay ayaa tilmaamaya in waq tiyada qaar ay goobjoog u noqdeen ka gudbidda qodobo la isku mari waayay inkaatoo ugu damb een shirkii uu istaagay.
Isu keenida iyo u kala dab qaadida dhinacya da siyaasadda Soomaaliya waa howl u taala Ma daxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Maxamed C/hi Farmaajo iyo dowladiisa balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in uu qeyb ku leeyahay khilaafyada dalka.
Dad badan ayaa qaba in Madaxweynayaa shii hore ee Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tir san mucaaradka ay qaateen doorkii Madaxwey naha Soomaaliya Md.Farmaajo, doorkaas oo ahaa isku wadida dalka iyo dadka.
2da madaxweyne hore ayaa ka go’an in xal laga gaaro khilaafyada jira, si dalka uu u galo doora sho, taasi oo haddii aysan dhici horseedi karta qalalaase amni.
Al-Shabaab oo go’aan rasmi ah kasoo saar tay tallaalka AstraZeneca ee CVOID-19
Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay ka ha dashay tallaalka ka hortegga Covid-19 ee Astra Zeneca, kaas oo la keenay dalka. Bayaan ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxa ay shaki weyn uga muuj iyeen waxtarka iyo badqabka tallaalkan oo horey u joojiyeen qaar ka mid ah wadamada reer Yurub.
Sidoo kale Al Shabaab ayaa shacabka Sooma aliyeed uga digtay inay isticmaalaan tallaalka ka hortegga Coronavirus ee loo yaqaano Astra Zeneca. Al-Shabaab ayaa sidoo kale ugu baaqd ay shacabka in Alle ba ri ay sameeyaan, si loo helo tallaal ammaan ah oo waxtar leh.
Ugu dambeyn bayaankan Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in DFS aysan awood u la heyn hubinta tallaalkan, maadaama aysan heys an sheybaar casri ah.
Si kastaba hadalkan ayaa kusoo aadayo, iya da oo Soomaaliya uu soo gaaray tallaalka Astra Zeneca, kaas oo isticmaalkiisa laga bilaabay qeybo badan oo ka mid ah dalka.
Maxaa looga hadlay kulankii Qoor Qoor, Cali Guudlaawe iyo Lafta-gareen?
Waxaa Shalay M/Muqdisho kulan ku yee shay madaxweynayaasha Galmudug, K/Galbe ed iyo Lafta-gareen oo ayagu isku mowqif ka ah xiisada doorashada dalka oo meel xasaasiya mareysa. Madaxweynayaasha 3da ah ee Gobol oo xulufo dhow la ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ayaa waxay ka wada-hadleen khila afka doorashada iyo kulamadii u dambeeyay ee ay la qaateen mdaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Sida ay Ogaatay Warbaahintu, Axm ed Qoor-Qoor, Cali Guudlaawe iyo Cabdi casiis Lafta-gareen ayaa kulankaan diirada ku saaray si dii meel dhexe la isugu keeni lahaa ma dax weynaha waqtigiisa dhamaaday iyo madaxwey na yaasha Puntland & Jubbaland oo ay si weyn is ku hayaan.
Sidoo kale waxaa looga hadlay kulankaan si dii uu u qabsoomi lahaa shirweynaha doorasho oyinka ee madaxda dowladda iyo kuwa maamu lada dalka oo xiligan ku gudban yihiin caqabado hor leh.
Kulankaan ayaa imanaya xili ay hakad gale en wada-hadaladii gooni-goonida ahaa ee u dha xeeyay shanta madaxweyne, kadib markii ay Ax med Madoobe iyo Saciid Deni shuruudo ku xi reen ka qeyb-galka shirweyanahaas.
Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabee lle iyo K/Galbeed ayaa maalmihii u dambeeyay isku dayey inay qanciyaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, si ay uga qeyb-galaan shirka Teendhada Afisyooni.
Madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa wax ay kalsooni darro ka muujinayaan hab-dhaqan ka guracan ee Farmaajo, kadib dhacdada weer arkii 19-kii Febraayo, waana mida keentay in wa x is-faham buuran ah laga gaari waayo kulama dii u dambeeyay.
Doorashada Soomaaliya: Sababta aysan Bee sha Caalamka u khasbi karin Madaxda Soomaalida
Madaxda Soomaalida ayaa muddo dheer is ku fahmi la' hannaanka doorashada waqtigeeda ka dib dhacday, xilli beesha caalamkuna ay da daal ugu jirto sidii dhinacyada kala aragtida duwan la isugu soo dhaweyn lahaa.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa M/ Muqdisho ku wada sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka, inkastoo aan lagu guuleysanin in shirkii la filayay ay dhammaant ood ka wada qeyb galaan. Ilaa hadda Madaxweynaha Maamulka Pun tland Siciid Cabdullaahi Deni iyo dhiggiisa Jubal and Axmed Maxamed Islaam ayaan ku biirin shirka ay ku wada sugnaayeen madaxda 3da maamul ee kale iyo dowladda dhexe. Marar ba dan ayay DFS madaxda 2da maamul ee shirka ka maqan ugu baaqday inay kusoo biiraan. War saxaafadeedkii ugu dambeeyayna wa xay madaxtooyada Soomaaliya ku sheegtay in Deni iyo Axmed Madoobe looga codsanayo inay ka qeyb galaan shir weyne dhawaan looga hadli doono xaaladda doorashada. Hase ahaatee, wa rsaxaafadeed wadajir ah oo Puntland iyo Jubal and ay Shalay soo saareen ayay ku sheegeen in mas'uuliyiinta dowladda dhexe "ay xagal daa cinayaan" shirkii loo ballan sanaa inuu ka qabs oomo magaalada Muqdisho.
Diblomaasiyiinta Beesha Caalamka, oo in muddo ahba xal u raadinayay xaaladda ismari waaga ah ee doorashada Soomaaliya ayaa dho wr isbuuc ka hor ku qanciyay madaxda Jubal and iyo Puntland in ay tagaan Muqdisho, walow ay ku guul darreysteen in ay ka dhaadhiciyaan ka qeyb galidda shirka loo fadhiyay.
Beesha Caalamku ma khasbi kartaa mada xda Soomaalida?
Barfasoor Ibraahim Faarax Bursaliid, oo ah khabiir falanqeeya arrimaha siyaasadda Soom aaliya, ayaa BBC-da u sharraxay dhowr sababo od oo uu fikir ahaan qabo in beesha Caalamku aysan cadaadis xad dhaaf ah ku saari karin siy aasiyiinta khilaafku u dhaxeeyo.
Ugu horreyn wuxuu Prof Bursaliid qeexay in hadda laga soo gudbay xilligii Beesha Caalam ku ay hoggaanka u heysay masiirka Soomaali da. "Beesha Caalamka ee la sheegayo waxay noqon karaan waddamo ay Soomaaliya u wada haddli karaan dal ka dal ama waa urur gobole edyo heer gobol ama heer qaaradeed ah ama waa ururro caalami ah sida Qaramada Midoob ay iyo wixii la mid ah, marnaba Soomaalidu ku ma khasbana Jamhuuriyad ahaan iyo ka dowlad ahaanba in xaanshi loo soo qoray ay ku dhaqan to ama ay raacdo.
"Waxaad mooddaa in lasoo dhaafay xilligii xukuumadda Soomaaliya ay ku jirtay ku meel gaarnimada oo laga caawinayay dal dhiska, na badeynta iyo dib u mideyntiiba. Tan iyo doora shadii 2012-kii waxaad mooddaa in laga baxay kmg-nimadii, sidaas darteedna ay tahay in la xu rmeeyo gobanimada iyo madax bannaanida siy aasadeed ee Jamhuuriyadda," ayuu yidhi Prof Bursaliid.
"Dal walba wuxuu ku sabsan yahay inuu Soom aalida ku xurmeeyo go'aannadooda masiiriga ah, sida uu Shiinuhuba caddeeyay. Laakiin had iiba ay noqoto in talooyin gurracan la siiyo waa in loo qariyo oo si hoose oo saaxiibtinnimo leh loogu sheego ama si hanjabaad ah loogu she ego, haddiiba uu jiro dal tun buuran sida Mare ykanka, Ingiriiska iyo Turkiga."
'Sababta aysan Beesha Caalamku waxba u qaban karin'
"Sabab ugu muhiimsan ee aysan Beesha Ca alamku aanay dhinacyada isugu soo dhaweyn karin, wax weynna aysan u qaban karin waa ina anay dooneynin in danihii ay dalka ka lahaayen xukuumadda markaas jirta ay wax kaga waaya an ama maamul laga yaabo barito in laftigiisa uu muhiimad gaar ah yeesho ay diidayaan inay aad u cadaadiyaan," ayuu yidhi Barfasoor Burs aliid oo la hadlayay BBC-da.
Mudada xilheynta madaxweyne Maxamed C/hi Farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekeyd 8dii February. Mucaaradku waxay sheegeen ina ysan madaxweynaha aqoonsaneyn. Dowladdu se waxay sheegtay in madaxweynahu xilka he yn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cu sub. Ma jiro waqti la og yahay oo ay doorasha du dhici doonto.
Madaxweyne Farmaajo, R/Wasaare Rooble, madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Gal mudug, Hirshabeelle, K/Galbeed iyo guddoomi yaha G/Banaadir ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa shirka wada tashiga qaran, iyagoo su gayay inay kusoo biiraan madaxda Puntland iyo Jubaland.
Arrimaha dhici kara haddii madaxda qaar ay shirka ku gacan seyraan waxaa ka mid ah dhib u dhac hor leh, sida uu BBC-da u sheegay Jibriil Cali Aw Maxamed oo wax ka dhiga Jaamacad da Ohio ee dalka Mareykanka, sidoo kalena fala nqeeya siyaasadda.
"Maadaama ay madaxda Puntland iyo Juba land dhagaha ka fureysteen baaqii madaxwey ne Farmaajo, Beesha Caalamka ayaa hadda u heellan inay shirka soo fariisiso, heshiisna lagu gaaro in la hirgeliyo doorashadii lagu heshiiyay bishii September, 2020.
"Runtii haddii ay Deni iyo Axmed Madoobe ka baaqdaan shirkan waxaa dhici kara inay door ashadii sii jiitanto, murankanina uu sii daba dhe eraado," ayuu yidhi Jubriil.
Lama saadaalin karo waddada kale ee furan haddii uu fashilmo shirka wali qabsoomi la' ee ra jada laga qabo inuu Muqdisho ku dhex maro ma daxda Soomaaliya, kaasoo ujeeddadiisu tahay in lagu dhammeystiro heshiiskii doorashada ee la gaaray 17-kii bishii September ee sanadkii 2020-kii. Xigasho:BBC
Kiisaska cudurka Karoonaha ee Soomaaliya oo sii kordhay
Wasaaradda Caafimaadka dowladda Soo maaliya ayaa faahfaahisay kiisaskii ugu dambee yay ee cudurka Karoonaha.
Tirada 24 saac ee ugu dambaysay laga baa ray COVID-19 guud ahaan wadanka: 1010
o Laga Helay: 106
o Somaliland: 41
o Puntland: 37
o Banadir: 9
o Hirshabelle: 7
o Jubbaland: 6
o Galmudug: 6
o Lab: 58
oDhimasho: 8 (Somliland:6, Banadir:1, Puntl and:1)
o Bogsashada: 24
Tirada Guud ee Laga Helay: 11,398
Bogsashada Guud: 4,819
Dhimashada Guud: 529
Dowladda Soomaaliya & Uk oo ka wada hadlay Amniga doorashada
Wasiirka Amniga Xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale ayaa M/Muqdisho waxaa uu kula kulmay Safiirka UK ee Soomaaliya.
Kulanka oo saacado kooban qaatay ayaa 2da dhimac waxaa ay kaga wada hadleen xaalada Amniga doorashoo yinka iyo arrimaha kale ee muhiimka ah ee Amn iga Dalka iyo iskaashiga labada dal.
Wasiirka Amniga Xasan Xundubeey ayaa uga mahad celiyau dowladda Ingiriiska taageera da dhinaca Amniga oo ay siiyaan Dowladda Soomaaliya, waxaana uu ugu baaqay inay kor dhiyaan.
Safiirka Uk ee Soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay in ay joogteyn doonaan xiriirka ay la le eyihiin dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana ay ka taageeri doonaan dhinacyo ba dan.
Madaxweynaha Somaliland oo xil ka qaadis iyo Magacaabis sameeyay
Madaxweynaha Somaliland, Md.Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegtooyin Madaxweyne uu xilkii kaga qaaday Maareeyihii Guud ee hore ee Hay’adda Duulista iyo Madaarada kuna mag acaabay masuul cusub.
Waxaanay u dhignayd Wareegtada Madaxw eynuhu Sidan:-
Ku: Cabdi Maxamed Rodol, Maareeyihii Gu ud ee hore ee Hay’adda Duulista iyo Madaa rada
Og: Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Hor umarinta Jidadka
Sida aad la socoto, xilka ayey dabcigiisa tahay in uu meerto noqdo, oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed, waxaan ga rtay in laga bilaabo taariikhda Shalay aan kaa qaado xilkii aad haysay. Waxaan kaaga mahad-celinayaa muddadii aad haysay xilka Qaranka.
Markaan Arkay: Dastuurka Somaliland, Qodobka 90aad,
Markaan Tix-geliyey: Ahmiyadda ay Hay’a dda Duulista iyo Madaaradu u leedahay Dhism aha;
Markaan Arkay: In uu Hanan Karo Masuuliy adda ka Dhalanaysa Xilkan;
In Mudane, Cumar-sayid Cabdillaahi Aadan Qalinle laga bilaabo taariikhda Shalay uu ahaa do Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista iyo Garoomada Somaliland.
Xeer ilaalinta D/Goboleedka Puntland iyo Guddiga dardar galinta canshuuraha shaqaala ha UN-ka ee ku sugan deegaanada Puntland oo digniin u diray ajaanib canshuurtii bixi diiday oo ku sugan Goballada Bari iyo Mudug. Xeer ilaaliye kuxigeenka Puntland Maxa med Xa reed Faarax ayaa sheegay inay jiraan Afar Ru ux oo kamid ah Shaqaalaha UN-ka oo diiday bii xnta Canshuurta, kuwaas oo kala ah, Cabdinuur Xasan Axmed , Xersi Xuseen Nuur, Maxamed Cabdullaahi Farax, Nuuradiin Saciid Maxamed, kuwaad oo dhamaantood u Shaqee ya Hay’adda WHO.
Waxaa uu ka dalbaday Xeer ilaaliye kuxige enka Puntland in Afarta Xubnood ay Canshuur ta ku waajibtay ku bixiyaan ugu dambeyn Can shuurta 4/3/2021 hadii ay bixin waayaana Max kamad la horgeyn doono.
Ugu dambeyn Xeer ilaaliye kuxigeenka Punt land waxaa auu sheegay inay jiran 5 Ruux oo kale oo ka tirsan alaha UN-ka ee ka howlgalla Gobolka Karkaar, waxaana uu ka dalbaday